Ongororo Dzako Dziri Kupotsa Chiratidzo Martech Zone
NeChishanu, ndakataura pa eduDEV, musangano wevadzidzisi veYunivhesiti nematare ekushambadzira, nezve kushandiswa kweAnalytics. Vazhinji vevateereri vanoshandisa Google Analytics, saka mharidzo yacho yakachinjirwa iyo. Panzvimbo pekuita imwe mharidzo inofinha paGoogle Analytics, ini ndaida kupa vateereri nharo yezvavo analytics mafomu akange asipo uye ndeapi mamwe maturusi aive kunze uko ekuzadza nzvimbo.
Zvishandiso zvandataura nezvazvo mune yangu Mharidzo yekuongorora:
Google Analytics URL Inovaka - chishandiso chiri nyore kugadzira mushandirapamwe wako kubvunza Google Analytics.
Google Search Console uye Zvishandiso zveBing Webmasters.
Chiremera Labs kutarisa keyword chinzvimbo pane yako domain muGoogle neBing / Yahoo!
SEOmoz yekudzidza yekutsvagisa injini uye yavo PRO maturu ekushandisa uye yekumisikidza yako SEO kufambira mberi.
Google Places kuwedzera, kugadzirisa, uye kugadzirisa nzvimbo yako yebhizimisi yakatarwa mumigumisiro yekutsvaga kweGoogle. Bing uye Yahoo! Iva navo zvakare.
Bit.ly URL yekutevera. Ive neshuwa yekusaina kuPro account uye shandisa yako ipfupi dura. Bhizinesi ravo rinokutendera kuti utorese chero ipfupi URL account.
Sysomos, Radian6, Lithium (prev. ScoutLabs), BrandMentions, Google Alerts, Tinker, Tweetbeep, Backtweets, Tweetmeme uye Trackur ese anopa akasiyana mavhenekeri ehukama uye mukurumbira kuongorora.
Klout - kuyera simba uye chiremera munzvimbo yemagariro.
FeedPress - Ongororo yeRSS feeds.
Google Maitiro uye Google Insights yekutsvaga.
Fireside - yakasimba podcasting chikuva patinogashira yedu kushambadzira podcast nema metrics ekuteerera akasimba.
Vimeo uye Youtube ese ari maviri anopa yakasimba analytics pane kuona uye kugovera vhidhiyo yako zvemukati.
Webtrends Mobile Analytics, Webtrends Facebook Analytics, Webtrends Mushanyi Data Mart uye Webtrends Optimize.
Ndinofunga ndinofanira kutaura Slideshare naizvo! Slideshare inopa stats pamaonero anoita mharidzo dzako nekuparadzirwa pamhepo.
Tags: Analyticsanalytics mharidzochiremera labsedudevgoogle analyticsKeynotepowerpoint